Teny soa sakafo Alakamisy 2A Paka (Jo 3, 31-36) 23/04/2020 | FKMP
Alakamisy 2A Paka (Jo 3, 31-36) 23/04/2020
Teny soa sakafo Alakamisy 2A Paka (Jo 3, 31-36) 23/04/2020
Hatrany am-piandohana nahariana izao tontolo izao dia efa niangaran’Andriamanitra manokana amin’ireo zavaboahary nohariany ny olombelona noho ny fitiavany antsika ka nohariany mba hitovy endrika aminy. Nomeny fahafahana hisafidy isika hanaiky na handa izay nolazainy fa marina tamin’ny alalan’ireo mpaminany maro nampitondrainy ny hafany ; eo anatrehan’ny safidy ananantsika kosa anefa dia tsy maintsy tompon’andraikitra isika amin’ny vokatry ny safidy ataontsikana hino izay rehetra nambaran’ireo mpaminany nifandimby tamin’ny testamenta taloha ary mbola tsy sasatra izy nandefa an’i Joany Batista ho mpialoha lalana hanambara ny fahatongavan’ny Mesia, teny fahamarinana alohan’ny nanirahany ny zanany lahitokana dia ilay Teny tonga nofo ka miaramonina amintsika.
Ny safidy ataontsika amin’ny fiainana dia misy vokany avokoa safidy izay mitarika antsika amin’ny lalan’ny fiainana mahasoa sy firaisantsika amin’Andriamanitra. Fa eo ihany koa ny safidy izay mitarika antsika mankany amin’ny fahafatesana ara-panahy sy ny fisarahana amin’Andriamanitra. Raha misafidy ny fiainana miaraka amin’Andriamanitra isika dia midika izany fa mizara ny fiainany isika ka tonga zanany. Andriamanitra dia fitiavana, noporofoiny izany tamin’ny nanaovany sorona ny zanany teo amin’ny hazofijaliana mba hahazoantsika famonjena.
Tsy misy fetra ny fitiavan’Andriamanitra antsika ary tiany ho tsapantsika mandrakariva amin’ny fiainantsika ilay fitiavany antsika amin’ny faharetany miantso antsika tsy ankijanona mba hibebaka. Eo anatrehan’izany dia mila miezaka mandrakariva isika manavao ny fifandraisantsika aminy amin’ny alalan’ny fiainantsika ny fahamarinana, fihainoana ny teniny sy mitsaintsaina izany ary entina hanilo amin’ny fiainana. Tadidio anefa fa mba hahafahantsika ho tonga fianakavian’Andriamanitra dia nalatsany ny ran-janany hanasana ny otantsika. Mba hahazoantsika ilay fanahy maha zanaka dia tsy maintsy niaritra fankahalana sy fanamelohana Izy. Ary tsy maintsy nasandratra teo ambony hazofijaliana Izy mba hananantsika famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay.
Previous Post: Alarobia 2A Paka (Jo. 3, 16-21) 22/04/2020
Next Post: Zoma 2A Paka (Jo 6,1-15) 24/04/2020